यद्यपि यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘संक्रमण नहुने भने होइन, तर सचेत भने हुनै पर्छ ।’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुन पनि डिस्चार्ज भइसकेकाहरुलाई पुनः संक्रमण नभएपनि सतर्कता भने अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘डिस्चार्ज भएर १४ दिन नाघेर घर गएका व्यक्तिलाई पुनः कोरोना भएको पाइएको छैन । त्यसैले कोरोनाबाट तर्सिहाल्नुपर्ने र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
केही समयअघि उपचारपछि घर फर्र्किएका केही व्यक्तिको पिसीआर परीक्षणका क्रममा पुनः पोजेटिभ देखिएको समाचार बाहिर आएको थियो । यो विषयमा डा. पुन भन्छन्, ‘ती व्यक्तिमा निष्कृय भाइरसको टुक्राटुक्री (पार्टीकल) बाँकी रहेको देखियो, त्यसैले त्यस्तो रिपोर्ट आएको हो ।’ अन्य देशमा पनि संक्रमित व्यक्ति घर फर्किसकेपछि पुनः सो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको वारेमा कुनै तथ्य सार्वजनिक नभएको संक्रामक रोग विशेषज्ञहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ । गत २४ घण्टामा ७० जना मात्र नयाँ संक्रमित थपिएको छ । गत २४ घण्टामा तीन हजार ६ सय ४८ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । संक्रमित मध्ये अधिकांश लक्षणविहीन रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल संक्रमितमध्ये ८ हजार २ सय ३९ जना मात्र सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । हाल २३ हजार ९ सय १० जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म २ लाख ७९ हजार पाँच सय ९९ जनाको आरटीपिसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरीएको छ । हालसम्म संक्रमितमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दुई हजार ९७ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
गत आइतवार एक सय ३२ जना, सोमवार तीन सय ३४, मंगलवार ६ सय ८८ जना, बुधबार २ सय ५३ जना, विहीवार एक सय ३९ जना, शुक्रवार एक सय २० जना र शनिवार चार सय ३१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । यसरी हेर्दा कुल संक्रमित मध्ये ५० दशमलव ४९ प्रतिशत डिस्चार्ज भएको देखिन्छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डे भने कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सतर्कता अपनाउन सुझाव दिन्छन् । ‘सकभर घरभित्र बसौं, बाहिर जानुपरे सही तरिकाले मास्क, चस्मा र पञ्जा लगाऔं । ६ फिटको व्यक्तिगत दुरी कायम गरौँ । भीडभाडमा नजाऔं र साबुनपानीले पटकपटक हात धुने बानी गरौँ । राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले खबर खबर लेखेका छन् ।